प्रदेश २ मा दाईजोको रुप विकराल: श्रीमतिमाथि श्रीमानको आतंक !, मट्टितेल छर्केर लगाए आगो
जनकपुरधाम । श्रीमानले दाईजो नदिएको रिसमा आफ्नै श्रीमतिकाे जीउमा आगो लगाएएका छन् ।
धनुषाको शहिदनगर नगरपालिका वडा नं. १ बडका चिरैया भन्ने टोलमा स्थानीय झरी गोईतका छोरा मुकेश कुमार गोईतले आफ्नै श्रीमति निर्मला देवी गोईतकाे जीउमा आगो लगाएका हुन् ।
गत बैशाख ५ गते दिउँसै मुकेशले निर्मलालाई जीउमा मट्टितेल छर्केर आगो लगाएका थिए । निर्मलालाई कोठा बन्द गरी जीउमा मट्टितेल छर्केर सलाई बालिदिए, निर्मला चिच्याउँदै रहिन र मुकेश भागे । निर्मलालाई चिच्याएको आवाज सुनेपछि छिमेकीहरुले ढोका फोडेर तत्कालै आगो निभाएको थियो । निर्मलाको छाती र पेटसम्म करिब ३५ प्रतिशत भाग जलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता रामेश्वर कार्कीले जनाए ।
निर्मला र मुकेशको विहेको १० महिना मात्र भएको थियो । दाईजोले पिरोलिएका निर्मलाका परिवारलाई दाइजो दिन पनि थप तनाव नै थियो । शायद मुकेशको केही माग थियो दाईजोको रुपमा ससुरालीबाट, उनीहरुलाई समय लगाएको कारण जलाएको हुनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
उनको परिवारले के भन्छ ?
धनुषाकै कमला नगरपालिका वडा नं.५ लक्कड टोल बस्ने निर्मलालाई मुकेशसँग ४ लाख रुपैयाँ दाईजो दिएर धुमधामका साथ विहे गरिएको थियो । नशालु र जड्याहा स्वभावको मुकेशले निर्मलासँग समान्य झगडाको निहुँ खोज्दै मट्टितेल छर्केर आगो लगाइदिए ।
निर्मलाको उपचारको लागि छिमेकीको सहयोगमा तत्कालै जनकपुर अञ्चल अस्पताल ल्याइएको थियो भने घाईतेको प्रकृति हेर्दा उनलाई काठमान्डौ रिफर गरिएको थियो । निर्मलाको उपचार अहिले शिक्षण अस्पताल महाराजगँज काठमान्डौँमा भईरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाका प्रहरी नीरिक्षक यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगो लगाएर फरार भएका मुकेशको खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ ।
निर्मलाको स्वास्थ्य अवस्था अहिले गम्भिर रहेको उनका परिवारजनलाई उदृत गर्दै प्रहरीले जानकारी दिएको छ । अस्पतालमा उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा। सुरेन्द्रजंग बस्नेतले निर्मलाको ३५ प्रतिशत बढी शरीर जलेको बताए । ४० प्रतिशतभन्दा बढी जलेको मानिसलाई बचाउन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले निर्मलाको अवस्थामा पनि एक हप्तासम्म केही भन्न नसकिने जानकारी दिए ।